‘कोही त भने जहाजमा हरर...’ - Ratopati
यो पुरानो गीतको आज याद आएको छ । किनभने यस गीतले नेपालको विगतदेखि वर्तमानसम्मको प्रतिनिधित्व गरेको छ, नेपालको यथार्थ, शासनव्यवस्था आदिलाई झल्काएको छ ।
साथै, नेपालमा समयसमयमा परिवर्तनका लागि भएका क्रान्तिकारी प्रयासहरुलाई पनि यो गीतले आत्मसात् गरेको छ । यो गीत नेपालमा दशकौंदेखि चल्दै आएको वर्गीय, जातीय, लैंगिक आन्दोलनको प्रतीक हो । नेपालमा विद्यमान वर्गीय असमानता, पूँजीवादी सोचविरुद्धके सशक्त आवाज हो । त्यसकारण पनि यो सर्वहारावादी आन्दोलनलाई जबर्जस्त रुपमा प्रस्फुटन कालजयी साहित्य हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दालनसँग जोडिएको यो गीतसँगै मलाई विगतका कम्युनिष्ट तथा क्रान्तिकारी नेताहरुको याद आयो । ती नेताहरुमा कहिले पनि बिर्सन नसक्ने एकजना राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी नेता हुन् मदन भण्डारी ।
मदन भण्डारी नेपाली इतिहासमा कहिले पनि नबिर्सिने यस्ता पात्र हुन्, जसलाई नेपालीहरु सधैं आदर तथा श्रद्धापूर्वक स्मरण गरिरहन्छन् । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यस्ता होनहार र निष्ठावान् नेतालाई हामीले अकालमा नै गुमाउनुप¥यो । भण्डारीका देशभक्तिपूर्ण धारणा, योजना, जबज सिद्धान्त आदिका कारण नेपालको कम्युनिष्ठ मजबुत बनेको छ । तर, उनको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भयो । उनको हत्या भएको यतिका वर्ष बित्दा पनि हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
नेपालमा दुई दशकयता विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका कम्युनिष्ट राजनीतिक दलहरुले सत्तामा बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छन् । अहिले पनि कम्युनिष्ट नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा मदन भण्डारीकै पत्नी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिका रुपमा आसीन छिन् । देशकै दोस्रो ठूलो पार्टीको रुपमा नेकपा एमाले छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि मदन भण्डारीको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । उनको हत्या कसरी भयो, कसले ग¥यो भन्ने कुरा रहस्यको गर्भमा नै छ । उनको हत्यारालाई अझै सजाय दिलाउन सकिएको छैन ।
मदन भण्डारी केवल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको श्रीमान् मात्र होइनन्, उनी त नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका महान् योद्धा, सर्वोच्च नेता र जनताको सम्मानीय पात्र हुन् । उनी राष्ट्रको नै सम्पत्ति हुन् । विश्वले लेनिनको अवसानपछि पनि अर्को लेनिन नेपालमा रहेको र उनी मदन भण्डारी हुन् भनेर श्रद्धापूर्वक भनेका अद्वितीय व्यक्तित्व हुन् । उनकै श्रीमती अहिले राष्ट्रप्रमुख भएको समयमा भण्डारीको हत्याबारे छानबिन गर्नसक्नुपथ्र्यो । हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि जनयुद्धताका मदन भण्डारीको हत्यारालाई सार्वजनिक गर्छु, उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, पटकपटक भनेका थिए । उनी पनि अहिले सत्ताको प्रमुख पदमा छ । उनलाई आखिर कसले रोकेको छ यो घटनाको छानबिन गर्न ? आखिर किन कोही यस घटनाको छानबिन गर्न चाहिरहेका छैनन् ? यो विषयमा जनतालाई नेताहरुले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
मदन भण्डारीको हालैमात्र स्मृतिदिवस सम्पन्न भएको छ । उक्त दिवसमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब आफ्नो पार्टीले सरकारमा गएपछि उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, उनी यसअघिको सरकारको प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि घटनाको छानबिन गर्नसक्थे । तर, त्यो तदारुकता उनमा देख्न सकिएन । त्यसकारण यी कुरा पनि कुरामा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिन्छ ।
आजभन्दा दशकौं अगाडि मदन भण्डारी जीवित रहँदाको नेपालको अवस्था र अहिलेको अवस्था पनि उस्तै नै छ । व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर चरित्र परिवर्तन भएको छैन । प्रवृत्ति अझ उस्तै नै छ । अझै पनि पूँजीपति दलालहरुको नै हालिमुहाली छ । सरकारमा जाने अधिकांश नेतृत्वले सर्वहारा वर्गभन्दा पनि सीमित मात्रामा नै रहेका पूँजीपतिहरुलाई स्रोतसाधन गर्ने सम्झौता गरिरहेका छन् । सर्वहारा वर्गको अवस्था ज्यूँकात्यू नै छ । अझ वर्गीय असमानताको खाडल त दिनानुदिन बढिरहेको छ । अहिले पनि माथि भनिएको गीतमा जस्तै, कोही जहाजमा हरर छ भने कोही पसिनाको तरर नै छ । साँच्चै नै नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नेपालका सर्वहारा वर्गका लागि काम गर्छु भनेर देखाउने हो भने त्यसको सुरुवात मदन भण्डारी हत्या प्रकरणको छानबिन र दोषी पत्ता लगाएर गर्नुपर्छ । अनि मात्र वास्तविक यात्रा सुरु हुन सक्छ ।